Tsika Yemumba Midziyo, Kudya Fenicha Vagadziri | NuTrend Furniture
6 Chidimbu Chemazuva Ano Simbi uye Wood Mabhuku esherufu ekuchengetedza 502145
1. 6 Chidimbu Chemazuva Ano Simbi uye Wood Mabhuku esherufu ekuchengetedza.Kukura: L30xD30xH162cm / 11.8 '' x11.8 '' x63.8 ''.3. Yakasimba simbi furemu mune nhema kupera inopa yakasimba kumira uye yakaenzana rutsigiro.4. Masherufu ehuni-erima anogadzira kutaridzika kwemaindasitiri uye kwekumhanya.5. X-machira anounza chic kutarisa kunotadzisa mabhuku kudonha.6. Inoenderana zvakakwana mune chero kona kubatsira kubatsira kushandisa nzvimbo nzvimbo zvakaringana.
4 Chidimbu Chemazuva Ano Wood Bookshelf yeKuchengeta 502160
1. 4 Chidimbu Chemazuva Ano Wood Bookshelf yeKuchengeta.Kukura: L80xD29xH120cm / 31.5 `` x11.4 '' x47.2 ''.3. 4 dhifa rakafara masherufu anopa yese yekuchengetera nzvimbo yaunoda.4. T25mm gobvu beveled pamusoro neprofile kushongedza.5. 40x25mm makumbo akasimba anopa rutsigiro rwakaringana rwekushongedza kwako kwemba.6. Contemporary X-machira anounza chic uye imba inotaridzika iyo inodzivirira mabhuku kudonha.7. Yakakura zvakanaka kune chero kupi kwekuchengetedza.
Contemporary Narrow Wood Console Tafura ine Drawers Kurarama Kamuri Fenicha 203505
1. Contemporary Narrow Wood Console Tafura ine Madhirowa Ekugara Fenicha.Kukura: L86.6xD30xH80cm / 34.1 `` x11.8 '' x31.5 ''.3. Yakagadzirwa kubva kuMDF ine pendi inoshamwaridzika.4. Yakagadzirwa nemaviri ekushongedza A-machira.5. Yakawanda nzvimbo yekuchengetera nekuda kwemadhirowa maviri akapamhama uye maviri masherufu ezasi nzvimbo.6.Inowanikwa mukushongedzwa kwakasarudzika kwakasiyana kumativi ese.
Yakasarudzika Yemazuva Ano Accent Sofa Tafura Yekugara Kamuri 203367
1. Yakasarudzika Yemazuva Ano Accent Sofa Tafura Yekugara KamuriKukura: L45xD35xH60cm / 17.7 `` x13.8 '' x23.6 ''3. Yakashongedzwa T25mm oak veneer yepamusoro iyo inozadzisa zvakakwana iyo chena yakapenda muviri4. 4.5 * 4.5cm Makumbo makobvu ekuvakwa kwemhando yepamusoro uye kumira kwakasimba5. Yakawanda nzvimbo yekuchengetera nekuda kwekomputa dhirowa uye yakakura nzvimbo pasherefu6.Kuratidzira kwakagadzirwa kunononoka padhirowa madhirowa ane akareba simbi inotsvedza uye mubato.7. Yakanaka echinyakare dhizaini, Maviri toni color scheme, Chikamu cheAIX renji.